Mahila Swasthya किन बढदैन बच्चाको तौल र उचाइ, के भन्छन् विशेषज्ञ
किन बढदैन बच्चाको तौल र उचाइ, के भन्छन् विशेषज्ञ
काठमाडौं - सबै बच्चाहरुको शारीरिक विकास उकैनासले हुदैन कोहि बच्चा आफ्नो उमेर अनुसारको तौल र उचाइ निकै कम हुनु यो राम्रो लक्षण होइन। तौल र उचाइ बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण पनि आमाबुबाले विशेष जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। अस्पतालमा आएका अभिभावकमध्ये अधिकांशको साझा प्रश्न हुन्छ– बच्चाहरूलाई हृष्टपुष्ट र स्वस्थ राख्न के गर्ने होला ?
आमाबुबाहरू उचाइभन्दा पनि बच्चाको तौल नबढेकोमा बढी चिन्तित हुने गर्छन्। एक वर्षदेखि पाँच वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सही उचाइ र तौल छ कि छैन भनेर नियमित जाँच गर्नुपर्छ। बच्चाको मस्तिष्कको विकास दुई वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत हुने भएकाले यो समयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यदि बच्चालाई सही मात्रामा पोषण पुगेको छैन भने उचाइमा असर गर्छ। तौल भनेको घटबढ भइराख्ने गर्छ। बिरामी अवस्थामा बच्चाहरूले खाना रुचाउँदैनन्, यो बेला उनीहरूको तौल घट्छ। तर, निको भइसकेपछि पुनः खाना थाल्छन् र तौल पहिलाको जस्तै सन्तुलनमा आउँछ।
यस्तो अवस्थामा आमाबुबाले एकपटक चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ। आमाबुबाको बानी सधैं आफ्ना बच्चालाई अरूको बच्चा जस्तो किन देखिएन भन्ने हुन्छ। तर आमाबाबुको बनावट कस्तो छ, त्यसमा नै भर पर्छ बच्चाहरूको शारीरिक संरचना। स्वस्थ हुनु भनेको मोटो हुनु होइन। मोटो हुँदैमा बच्चा स्वस्थ हुँदैनन्। यदि सही तौल र सही उचाइ छ भने बच्चा आफैं स्वस्थ हुँदै जान्छ।एकदेखि पाँच वर्षसम्म बच्चाहरूको एकदम सक्रिय हुने उमेर हो। शारीरिक रूपमा पनि धेरै बाहिर उफ्रिने, खेल्ने, चल्ने भएकाले शरीरले ऊर्जा सञ्चय गर्न सक्दैन। यो अवधिमा उनीहरूको तौल कम हुने गर्छ। यदि पोषणयुक्त खानेकुरा खाँदा पनि बच्चाहरूको उचाइ र तौल चाहिनेभन्दा कम भयो भने सम्झनुपर्छ, कुनै न कुनै समस्या छ। त्यसपछि तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।
बच्चाहरूको तौल विभिन्न कारणले गर्दा नबढ्ने हुन्छ। कि त बच्चामा दीर्घ स्वास्थ्य समस्या हुनुप¥यो। कुनै पनि दीर्घ समस्या छैन भने किन बच्चाको उचित मात्रामा तौल र उचाइ नबढेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला बच्चाले खान पचाउन नसकेर पोषणको कमीले पनि यो समस्या देखापर्न सक्छ। खानाको एलर्जीका कारण पनि कतिपय बच्चामा यसखाले समस्या देखिने गरेका छन्। गहुँको एलर्जी हुँदा बच्चाको उचाइ र तौलमा गडबडी आउँछ भने पाचन शक्ति पनि कमजोर हुन्छ। यो समस्या जेनेटिक कारण पनि हो। अहिले नेपालमा यो समस्या पहिचान हुन नसक्दा बच्चाहरूले तौल र उचाइको समस्या भोग्नुपरेको छ। गहुँका परिकारले गर्दा समस्या भएको छ भने त्यस्ता खानेकुरा बार्नुपार्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा बच्चाको उचाइ र तौलमा सुधार आउँछ।
तौल र उचाइको समस्या आउनुमा थुप्रै लक्षण देखापर्छन्। जस्तैः रगतको कमीु, कसैलाई हप्ता–दुई हप्तामा डाइरिया हुनु, खानामा अरुचि, भिटामिन डीको कमी आदि। यस्तो लक्षण देखिए आमाबुबाले एकपटक चिकित्सकलाई देखाएर गहुँको एलर्जी भएको छ कि छैन भनेर रगत र इन्डोस्कोपीको माध्यमबाट टेस्ट गर्न सकिन्छ। खाना खान नमान्ने बच्चालाई कतिपयले चकलेट, बिस्कुट दिएर फकाउने गर्छन्, यो राम्रो होइन। बच्चाहरूलाई कब्जियत छ भने पनि तौल र उचाइको समस्या हुन सक्छ। कब्जियत भयो भने दिसा कडा हुन्छ। त्यसैले सानो बच्चाहरूलाई दिसा गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बेला कुना गएर बस्ने, रुने, दिसा गर्न डराउने गर्छन्। कब्जियत भएको खण्डमा बच्चालाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि दिने र ट्वाइलेट बस्ने तालिम दिनुपर्छ।
खाना खाने नली र पेटको भागको मसल कमजोर भयो पाचन प्रक्रियामा समस्या आउँछ। यो समस्या विशेषगरी दुई वर्षभन्दा साना बच्चाहरूलाई हुन्छ। पाचनशक्ति कमजोर हुँदा वान्ता हुन्छ। जसका कारण पोषण तत्व प्राप्त हुँदैन। ठूला मान्छेलाई जस्तै बच्चाहरूलाई पनि एसिडिटी हुने गर्छ। जसका कारण पेट ढुस्स हुने भएकाले खाना मन नलाग्ने हुन्छ। सही मात्रामा बच्चाहरूमा पोषण तत्व अपुग हुँदा उचाइ र तौलमा समस्या देखापर्छ।हर्मोन पनि अर्को कारण हो, जसले शरीरको तौल घटबढ हुन्छ। त्यसो भयो भने बच्चाको थाइराइड जाँच गर्नुपर्छ। यस्ता समस्याले बच्चाहरू जति बढ्नु पर्ने हो बढ्न पाउँदैनन्। बच्चालाई पोषणयुक्त खानाका साथ साथै शारीरिक कसरत पनि उतिकै जरुरत हुन्छ। नियमित रूपमा तौल लिने र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगमा ल्याएको चार्टमा राखेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक नाप हेरेर बच्चाको वृद्धि ठिकसँग भएको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराइराखनु पर्दछ ।
शरीरको बनावट अनुसार कस्तो खानपान गर्ने ? ९ घण्टा पहिले